कांग्रेस कतातिर ?
इतिहासबाट प्रेरणा लिएर नित नयाँ भर्‍याङ उक्लिइएन भने स्वर्णिम इतिहास पनि भार बन्छ, स्मृतिको थुप्रो मात्र । अरू मंगल ग्रहमा अवतरण गरिसक्दा यता भने पुष्पक विमान थियो कुनै बेला भनेर के हुन्छ !
असार २५, २०७८ श्रीकृष्ण अनिरुद्ध गौतम
विक्रमको १९९३ मा देशमा एउटा अग्रणी, क्रान्तिकारी राजनीतिक दलको स्थापना भएको थियो । शासनमा जहानियाँ राणा थिए । त्यही दलको अग्रसरतामा राणा शासनविरुद्ध देशमा संगठित क्रान्तिको बीजारोपण, त्यसपश्चात् देशमा जनजागरणको नयाँ लहर प्रारम्भ भएको थियो ।
तर यहाँ कसैलाई त्यो दल नेपाली कांग्रेस हो भन्ने भ्रम नहोस्, त्यो राजनीतिक दल कांग्रेस थिएन । कांग्रेस त त्यसको एक दशकपछि बल्ल, २००३ सालमा सुब्बा देवीप्रसाद सापकोटाको सभापतित्वमा बनारसमा ‘अखिल भारतीय नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेस’ नामले गठन भएको थियो । गठन भएको केही समयपश्चात् ‘नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेस’ भनेर पुनर्नामकरण गरिएको थियो । २००६ सालमा, त्यही कांग्रेस प्रजातन्त्र कांग्रेससँग एकीकरण गरेर नेपाली कांग्रेस भएको हो ।
त्यो दल जसले नेपाललाई नागरिक अधिकार स्थापना–उन्मुख र प्रजातन्त्रको मार्गप्रशस्त गरायो, त्यसको नाम हो— नेपाल प्रजा परिषद् । प्रजा परिषद् आज इतिहास भएको छ अर्थात् त्यसको कुनै गतिविधि वर्तमान छैन । निवर्तमान भइसक्यो, उहिल्यै । त्यसको गतिविधिको चर्चा पुस्तकालय र कतिपय पुराना मानिसका घरमा सीमित भएको छ । शोधकर्ताहरूका लागि इतिहासका पानामा उपलब्ध छ । हो, दस–पन्ध्र वर्षपहिला एक पटक कतै साइनबोर्डमा देखिएको थियो (त्यो साइनबोर्ड अझै कतै छ कि, थाहा भएन); आजको नेपालको राजनीतिक परिदृश्यमा त्यसको उल्लेख्य चर्चासम्म कतै छैन ।
चार प्रातःस्मरणीय र सच्चा अर्थमा सहिद भन्नलायक शुक्रराज शास्त्री, गंगालाल, धर्मभक्त माथेमा र दशरथ चन्द प्रजा परिषद्कै प्रेरणाले प्राणोत्सर्ग गर्न तत्पर भई मातृभूमिको उद्धारका निम्ति बलिवेदीमा चढेका थिए । तर २००७ सालसम्म नपुग्दै प्रजा परिषद्ले आफ्नो सान्दर्भिकता गुमाइसकेको थियो । उसलाई उछिन्दै कांग्रेस जनजागरणको पर्याय र नागरिक अधिकारको अग्रमोर्चामा स्थापित भइसकेको थियो ।
प्रजा परिषद्कै नेताहरूसमेत कांग्रेसमा समावेश भएका थिए । स्वयं गणेशमान सिंह नै प्रजा परिषद्बाट कांग्रेस बन्नुभएको थियो । तत्कालीन कांग्रेसलाई सृजनशील अभियानी तन्नेरी पुस्ताले नेतृत्व प्रदान गरेको थियो । त्यसैकारण सात सालको जनक्रान्तिको सम्पूर्ण श्रेय कांग्रेसलाई प्राप्त भएको हो, यद्यपि फेरि सम्झाऊँ, त्यस क्रान्तिको जग कांग्रेस बन्नुभन्दा एक दशकपहिल्यै प्रजा परिषद्ले राखेको थियो ।
यहाँ जिज्ञासा उत्पन्न हुन सक्छ, शीर्षक ‘कांग्रेस कतातिर’ राखेर, यति विस्तारित विवेचनचाहिँ प्रजा परिषद्को किन ? यसको प्रयोजन छ । प्रजा परिषद् स्वर्णिम र उज्ज्वल इतिहास भएको पार्टी हो । तर इतिहास स्वर्णिम भएर मात्र हुँदैन । इतिहास हुँदैमा के नै हुन्छ र ! यदि इतिहासबाट प्रेरणा लिएर नित नयाँ भर्‍याङ उक्लिइएन भने स्वर्णिम इतिहास पनि भार बन्छ, स्मृतिको थुप्रो मात्र । अरू मंगल ग्रहमा अवतरण गरिसक्दा यता भने पुष्पक विमान थियो कुनै बेला भनेर के हुन्छ ! आसलाग्दो वर्तमान पनि हुनुपर्छ, त्यसको नित्य जागरुक अनुहार हुनुपर्छ । तन्नेरी पुस्तालाई यसले के प्रस्ताव (अफर) गर्छ, भावी पुस्ताका निम्ति दलविशेषसँग के–कस्ता योजना छन्, यसले दलको अस्तित्व स्वीकार अथवा अस्वीकार गर्न धेरै माने राख्छ । दल भविष्यमुखी हुनुपर्छ, तब बल्ल स्वीकार्य हुन्छ ।
आसलाग्दो वर्तमान र अनुहार हुनु त पर्छ नै, एउटा राजनीतिक दल देशका भविष्यको आशा र भरोसा पनि बन्न सक्नुपर्छ । नसक्दा त्यस्तो पार्टीको नियति प्रजा परिषद्कै जस्तो बन्न पुग्छ भन्नलाई नै यहाँ मैले सुरुमै यसको चर्चा गरेको हुँ । कांग्रेसले त झन् आफैंलाई हेरे पनि हुन्छ; कहाँ थियो कांग्रेस, आज कहाँ पुगेको छ छर्लंगै छ । आज उसको नियति कहिले यो बैसाखी त कहिले त्यो बैसाखीको भर बन्न पुगेको छ । आफूलाई नित्य नवीकृत नगर्ने राजनीतिक दलले प्रजा परिषद्ले जस्तै ढिलोछिटो आफ्नो सान्दर्भिकता गुमाउँछ र यस्तै बेलाबेला, जब कसैको सान्दर्भिकताबारे विमर्श हुन्छ, प्रसंगवश त्यसबखत उदाहरणका रूपमा नाम लिने गरिन्छ ।
गुमनाम प्रजा परिषद् मात्र भएको होइन; यथार्थमा दलले, संगठनले, संस्थाले सान्दर्भिकता गुमाउने घटना अन्यत्र पनि हुन्छन् र भएका छन् । जब दलहरू, संगठनहरू, संस्थाहरूमा जडता आउँछ, त्यसले तिनको धरती रूखो बन्छ, फलस्वरूप उत्पादकत्वको अन्त्य हुन्छ । किसानले माटो बनाएजस्तै दललाई पनि जीवन्त राख्न विचार अद्यावधिक गर्दै नयाँ पुस्ताले सिञ्चन गर्नुपर्छ । यसर्थ प्रजा परिषद् एक दृष्टान्त हो । यस्ता अरू पनि प्रशस्तै छन् । नजिकै भारतमै जयप्रकाश नारायण, सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी, राममनोहर लोहिया, आचार्य नरेन्द्रदेव सदृश दिग्गजको वरद संरक्षणप्राप्त, झन्डै नेपाली कांग्रेसकै जस्तो झन्डा भएको प्रजा सोसलिस्ट पार्टी आज अस्तित्वमै छैन ।
अस्तित्वमा छैन मात्र होइन, प्रजा सोसलिस्टको सैद्धान्तिक धार नै लुप्तप्रायः हुन पुगेको छ । भारतीय सोसलिस्टहरू छरपस्ट हुँदै चियाको कपभित्र आफूलाई खोज्दै कोठे गफमा सीमित हुन पुगेका छन् । वैचारिक धारलाई अरू प्रखर बनाउन र विचारलाई अद्यावधिक गर्दै सामूहिकता जनाउने संरचना नवीकृत गर्न नसक्दा परन्तुमा हुने गति त्यही हो, नेपालमा प्रजा परिषद् र भारतको प्रजा सोसलिस्टजस्तै । पछिल्लो समयमा भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसले पनि आफ्नो राजनीतिक समष्टि गुमाउँदै गएको छ । भारतीय स्वतन्त्रता संग्रामको नेतृत्व गरेको, देशलाई बेलायती दासताबाट मुक्त गर्ने पार्टी नयाँ दिल्लीको २४–अकबर रोडको कार्यालयमा संकुचित हुँदै गएको छ । न भरपर्दो नेता छ, न त आस गर्न मिल्ने नेतृत्व । पार्टी एउटा परिवारको बन्धक भएर रहेको छ । अझ दर्दनाक अवस्था त के भने, क्षेत्रीय दलहरूसँग गठबन्धन गर्दासमेत भारतीय कांग्रेसलाई आफ्नो इज्जत जोगाउन हम्मेहम्मे परिरहेको छ; अवस्था निरन्तर खस्किँदो छ ।
तात्पर्य के भने, अतीतमा दलविशेषको विशिष्ट योगदान हुँदैमा, आफ्ना संस्थापक नेताहरूका नाम लिँदैमा, कुनै पनि दल अब मतदातालाई स्वीकार्य भइहाल्दैन । त्यो देशमा तीनवटा ठूला राजनीतिक परिवर्तनको नेतृत्व गर्ने नेपाली कांग्रेस नै किन नहोस्, आफूलाई नयाँ पुस्ताको आकर्षणको केन्द्र बनाउन नसके यसको गति पनि नेपालको प्रजा परिषद् र भारतको प्रजा सोसलिस्ट पार्टीकै जस्तो हुन के बेर लाग्छ र !
किनभने जति तुजुक देखाए पनि परन्तुमा अद्यावधिक गरिएको विचार र तदनुरूप ऊर्जाशील नेतृत्व र कार्यप्रदर्शनकै कसीमा दलको औचित्य स्थापित हुन्छ । राजनीतिक दल मनोरञ्जनशाला होइन र होइन वृद्धाश्रम पनि । ध्येयनिष्ठहरूको मिसन हो । हिन्दीमा एउटा भनाइ छ, ‘समझदारों के लिए इसारा काफी है !’ यहाँ मेरो इसारा कांग्रेसको आजको दयनीय दशातर्फ छ भन्ने कुरा विज्ञ पाठकले पक्कै बुझिसक्नुभएको छ । कांग्रेसको नेतृत्व आफ्नो मृत्युपर्यन्त पार्टीको सिंहासनमा रहन चाहन्छ र यसको पंक्ति पनि तिनैलाई हेर्दै फगत अतीत गाएर बसेको छ । अझ विडम्बना त के भने, त्यही अतीतगाथा दोहोर्‍याए स्वतः आफ्नो औचित्य स्थापित हुन्छ भन्ने सोचकै बन्दी भएर बसेका छन्, कांग्रेसका नयाँ भनिएका नेतृत्वका प्रत्याशीहरू पनि ।
विज्ञान र प्रविधिको क्षेत्रमा भएको चामत्कारिक प्रगति भएको र यसले विश्वभर नै सोचमा, दृष्टिकोणमा, जीवनशैलीमा व्यापक परिवर्तन ल्याएको छ । प्रत्याशी नेतृत्वले राष्ट्रको कलेवर फेर्न विज्ञान र प्रविधिको कसरी अरू सृजनशील प्रयोग गर्ने, मानिसमा भइरहेका आकांक्षाहरूको उद्वेलनलाई कसरी सम्बोधन र त्यसलाई उद्यममा कसरी अनुवाद गर्ने भन्ने प्रश्नमाथि चिन्तन गर्नु र तदनुरूप टिम बनाएर काम गर्नुपर्छ । यदि त्यसो गर्दैन भने त्यस्तो दलको, त्यस दलका प्रत्याशीहरूको भविष्यको चिन्ता गर्नु व्यर्थ हो ।
आर्थिकदेखि लिएर यावत् सामाजिक अन्तर्सम्बन्धका हकमा समेत नेपालमै नयाँ चुनौतीहरू उपस्थित भएका छन् । ती चुनौतीहरूको सामना गर्दै देशमा कसरी सामाजिक समरसता कायम हुन सक्छ भन्ने विषयमा राजनीतिक दलविशेषलाई कुनै रुचि छैन भने त्यस्ता दलका पर्चालाई रद्दीको टोकरीमा फालिदिए हुन्छ । चौधौं महाधिवेशनको तयारीमा लागेका कांग्रेसका नेता र यसका पंक्तिलाई त यी कुरा झनै प्रयुक्त हुन्छन् ।
प्रश्न छ, को सभापति को महामन्त्री हुने, को हुने पदाधिकारी भनिरहँदा के कांग्रेसपंक्तिले उल्लिखित विषयमाथि विमर्शको माग गरिरहेको छ ? छैन भने त्यो महाधिवेशन केवल एउटा कर्मकाण्ड हुनेछ । पितृको पुण्यतिथिमा गर्नुपर्ने श्राद्ध कर्म मात्र हुनेछ । देशका ऊर्जाशील युवाहरू नवप्रवर्तनतर्फ उत्सुक छन्, तिनका लागि सहजीकरण गर्दै उद्यमको मार्गप्रशस्त गरिदिन सत्ताका प्रत्याशी कांग्रेसका नेताहरू के युवाहरूको उद्यमधर्मितालाई वाणी दिन तत्पर छन् ? छैनन् भने त्यस्तो राजनीतिक दलका कुनै पनि प्रतिनिधिसँग संवाद गर्नु समयको बरबादी मात्र हो ।
साथै जनसंख्याको एउटा ठूलो हिस्सा डायस्पोरा भएको छ । आजको डायस्पोरा विगतमा भारतको पूर्वोत्तर र बर्मा गएर पूरै उतै रमाउने खालको जस्तो छैन, आजको प्रवासी नेपाली नेपालमा आफ्नो दाबी राखिरहन्छ । नेपाली बाहिर बसे पनि दिनहुँ नेपालसित जोडिएको छ । त्यति मात्र होइन, ऊ नेपालमा सार्थक काम गर्न चाहन्छ र त्यसको प्रतिफलको प्रत्याभूति पनि खोज्छ । आज रैथाने र डायस्पोरा दुवै प्रतिफल अरूले खाने किसिमको लगानी गर्न चाहँदैनन् । ऊ आफैंलाई प्रतिफल दिने लगानी गर्न चाहन्छ, चाहे त्यो प्राज्ञिक होस् अथवा व्यापारिक ।
महाधिवेशनको तयारी गरिरहेको कांग्रेसले यी विषयहरूमाथि विशद् विमर्श गर्नु सान्दर्भिक र वाञ्छनीय दुवै छ । किनभने कांग्रेसका सामु आज यसर्थ दुई विकल्प छन्— यो कस्तो पार्टी हुने ? नेपालको प्रजा परिषद्जस्तो स्वर्णिम इतिहास भएको तर वर्तमान नभएको र दिग्गजहरूको नाम जोडिएको भारतको प्रजा सोसलिस्टजस्तो, जसको आज आएर नामोनिसान नै गायब हुन पुगेको छ अथवा वर्तमान र भावी पुस्ताका निम्ति आशा र भरोसा, उद्योग र उद्यमशीलताको मार्गप्रशस्त गर्न सक्ने आफैंमा एक दृष्टान्त । कस्तो बनाउने ? यहाँ भनिएका दुई विकल्पमध्ये कांग्रेसजस्तो बनाउने हो कांग्रेसपंक्तिले आगामी महाधिवेशनमा त्यस्तै विचारको पक्ष लिन्छ र त्यसैअनुसारको नेतृत्व चयन गर्छ ।
प्रकाशित : असार २५, २०७८ ०८:२८